सुनको भाउ एक वर्षयताकै उच्च, तोलाको ६३ हजार रुपैयाँमा कारोबार - नेपालबहस
सुनको भाउ एक वर्षयताकै उच्च, तोलाको ६३ हजार रुपैयाँमा कारोबार
गत ८ गतेयता बजार मूल्य लगातार बढ्ने क्रममा तीन हजार ८ सय रुपैयाँले बढेको हो। नेपालमा सुनको बजार भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावका आधारमा तोकिन्छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ एक वर्ष यताकै उच्च भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रति औन्स १३४७.८५ डलरमा कारोबार भैरहेको छ। तत्कालिन अवस्थामा प्रति औन्स ८ डलरले बढेको छ। अमेरिकामा बेरोजगार सुविधाको लागि आवदेन दिनेको संख्या बढ्दै गर्दा सुनको भाउ बढ्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ।
यस अगाडि दुई लाख १८ हजारले बेरोजगार सुविधा लिदै आएकोमा यो संख्या बढेर दुई लाख २२ हजार पुगेको छ। चार हप्ताको अवधि औसतमा दैनिक २५ सय जनाले बेरोजगार सुविधाको लागि आवदेन दिँदै आएका छन्। यसको प्रभाव सुनको मूल्यमा पर्ने गरेको छ।
अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध ‘ट्रेड वार’ समाधान नहुँदा पनि सुनको बजार मूल्य दिन दिनै बढ्दै आएको छ।
तोलाको ६३ हजार रुपैयाँमा कारोबार
सुनको भाउ एक वर्षयताकै उच्च
Previous articleनेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रावल शपथ ग्रहण कार्यक्रमहरुमा व्यस्त !
Next articleअब होर्डीङ बोर्ड राख्न नपाइने
जाजरकोट बारेकोटमा पहिरोमा पुरिएका १२ जनाकै मृत्यु भएको आशंका !
बन्दाबन्दीमा एक हजार ११९ जना मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट पीडित